आईफोनको फेसआईडी असुरक्षित, दुई मिनेटमै ह्याक हुन सक्छ ! – आइसिटी खबर:सूचना सञ्चार तथा प्रविधि खबर ICT Khabar.com : No.1 Tech INFO ICT News Site
Home / आइसिटी न्युज/टेक अपडेट / आईफोनको फेसआईडी असुरक्षित, दुई मिनेटमै ह्याक हुन सक्छ !
ICT Khabar/आइसिटी खबर August 13, 2019	आइसिटी न्युज/टेक अपडेट, प्रविधि विश्व, शिक्षा/चेतना, समाज खबर Leaveacomment 161 Views
एक अनुसन्धानले आईफोनको सबैभन्दा लोकप्रिय फिचर फेस आईडीलाई झुक्याउन सकिने देखाएको छ।
एक रिसर्चका अनुसार एप्पल डिभाइसको यस फेस आइडी फिचरमा एउटा त्यस्तो ‘बग’ छ जसका कारण एप्पलको फेस आइडी कालो टेप र चश्माको मद्धतले अनलक गर्न सकिन्छ ।
चीनको रिसर्च कम्पनी टेनसेन्टका अनुसन्धानकर्ताहरुले ब्याक ह्याट सेक्युरिटी कन्फ्रेन्सका समयमा एप्पलको फेस आइडी फिचरमा रहेको बगको लाइभ देखाइएको थियो ।
सोधकर्ताहरुका अनुसार २ मिनेटमै आइफोन ह्याक गर्न सकिन्छ । कन्फ्रेन्सका क्रममा आइफोनको लक खोलेर देखाइएको थियो ।
टेन्सेन्ट रिसर्चको एक टोलीले ग्लास र टेपको सहयोगमा फेसआईडी खोल्न सकिने बताएको छ। टीमले ब्ल्याक ह्याट सेक्युरेटी कन्फ्रेसमा यो समस्याबारे जानकारी दिएका हुन्।
अहिले सार्वजनिक भएको यस किसिमको कमजोरी आईफोनले अनलकको क्रममा कसरी डाटा कसरी क्याप्चर गर्छ भन्ने विषयसँग सम्बन्धित थियो। एक अनलाइन वेबसाइटका अनुसार यदि प्रयोगकर्ताले फेसअनलक गर्ने बेलामा चश्मा लगाएको छ भने यसले आँखा र त्यसको नजिकैको ३डी जानकारी लिँदैन।
Previous फेसबूकमा सन २०७० सम्ममा जीवित भन्दा मरेका प्रोफाइलको संख्या धेरै हुने
Next आईफोन ११ , यस्ता छन् विशेषता
सोनीले मानिसको सर्टमा लगाउन मिल्ने मोबाइलभन्दा पनि सानो आकारको ‘एसी’ (एयर कन्डिशनर) बनाएको छ।‘रेओन पकेट’ ...